အားဖြင့် Posted: Fisayo နိုဝင်ဘာလ 19, 2017
ဗီဒီယိုကိုအားလုံးမျက်နှာ-to-မျက်နှာဆက်သွယ်ရေးအကြောင်း. မျက်နှာ-to-မျက်နှာအဆက်အသွယ်ဖြစ်နိုင်ရှိရာအဘယ်အရာကိုမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေးတူညီနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မျာထည်းထည်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ interaction ကနှင့်အတူ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေးလျာထားသောဗီဒီယိုများ၏အကူအညီနှင့်အတူ မှလွဲ. ဒါမဖြစ်နိုင်ပါ. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗီဒီယိုများအများအပြားဖြစ်ရပ်အတွက်မျက်နှာ-to-မျက်နှာဆက်သွယ်ရေးများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ထွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြ, သင်မူကား သာ. ကြီးမြတ်ရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ခွင့်ကိုဗီဒီယို tools တွေလိုအပ်ပါတယ်.
မသက်ဆိုင်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ - - သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကအမှုအရာညာဘက်ကိုသွားရမှန်ထမ်းများနှင့်အတူအဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်လိုအပ်ပါတယ်. အီးမေးလ်ပို့ရန်ဤကိစ်စတှငျထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခဲ့, ဒါပေမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်အသစ်နယ်စပ်ဒေသကိုချိုးဖောက်အားလုံးပါဝင်နိုင်ဗီဒီယိုများအတွက်လိုအပ်ချက်များ necessitated ထားပါတယ်. ဒီအစဉ်ကိုအီးမေးလ်စျေးကွက်ပကတိလိုအပ်ချက်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့တတ်, ကပစ်မှတ်ထားရလဒ်များအတွက်ရှင်းပြ vidoes တွေနဲ့ပြည့်စုံရလိမ့်မည်.
သငျသညျထွက်မတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ရှိကြ၏. ဒါကြောင့်တာရှည်သင်သည်သင်၏ဖြေရှင်းချက်စျေးကွက်မှအင်တာနက်နည်းပညာ၏အင်အားကြီးပြုကြရန်တွန်းအားပေးနေကြသည် - သင်ဗီဒီယိုများလိုအပ်ပါတယ်. Videos အသင့်ရဲ့ဖောက်သည်များရောက်ရှိနှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲဘို့သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြောင်း. သို့သော်လက်ျာဘက်စတင်ခြင်းကနေရဖို့, သင် ... ရမည် ဗီဒီယိုတစ်ကားသင်သည်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထွက်ရပ်ကိုကူညီနိုင်ပုံကိုလေ့လာသင်ယူ ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုများအတွက်.
ပြည်သူ့မြင်ရအပေါင်းတို့နှင့်ဒီရက်ကအသံကိုငါကြားရပြီ - သော်လည်းမရညျအသှေးကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာနှင့်အတူ. ပြည်သူ့မရှိတော့ရှည်လျားကျမ်းကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာသူတို့မျက်စိစစ်ရန်အချိန်ရှိသည်. ပြည်သူ့အလွယ်တကူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရှည်လျား-အကွေ့အကောက်များသောဩဝါဒစာ၏ဤသည်နေ့ရက်ကာလများကိုစတင်ရောင်းချကိုအီးမေးလ်နှင့်အတူတက်တိုက်ကျွေးရ - ဒါပေမယ့်ဗီဒီယိုများအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောများမှာ. ပြည်သူ့ကြောင့်အသံ-အမြင်အာရုံ / မာလ်တီမီဒီယာအယူခံဝင်၏ဗီဒီယိုများနှင့်အတူချက်ချင်းချိတ်ဆက်. သင်သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုနှင့်အတူပရိသတ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအနိုင်ရရမယ်လိုလျှင်, ပြီးနောက်သင်ဗီဒီယိုများထင်ရမယ်.
ခဲပြောင်းလဲခြင်းပစ်မှတ်ပရိသတ်တွေတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ကြသည်တဲ့အခါမှာအများကြီးလွယ်ကူသည်. သငျသညျအလားအလာဖောက်သည်များ၏အာရုံကိုအနိုင်ရနိုင်ပါလိမ့်မည်, သူတို့ရဲ့သွင်းအားစုထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်သင်ဗီဒီယိုများမူတည်ပြီးနိုင်လျှင်သစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်သို့သူတို့ကိုငါ convert. စျေးကွက်ဗီဒီယိုများချိတ်ဆက်မှာသငျသညျအလွန်ထိရောက်သောလုပ်, လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဆောင်ဆက်သွယ်နှင့် converting - မခွဲခြားဘဲအချိန်နှင့်အကွာအဝေး၏. သူတို့ကသူတို့ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောအမှတ်တံဆိပ်နောက်ကွယ်မှမကျြနှာကိုမြင်သောအခါအလားအလာဖောက်သည်ချက်ချင်းသင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်. Videos အသင့်လုပ်ငန်းလူတွေကိုပြန်ပြောပြနိုင်မယ့်မျက်နှာနှင့်အသံတစ်သံပေး, သငျသညျကူညီပြီးမပါဘဲပြောင်းကူညီပေးနေ.
Videos ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြခြင်းနှင့်တိုင်းတာရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်အားဖြင့်သင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုခိုင်မာအောင်. ဒါဟာသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြောပြခြင်းဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာတိုးပွားစေဖို့ကူညီပေးသည်. စျေးကွက်ဗီဒီယိုများသင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုနှင့် prompt ကိုဖုန်းခေါ်ဖို့-action ကိုအတူ resonate ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုပုံပြင်များဝေမျှဖို့ခွင့်ပြု. ပိုသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းနားလည်နှင့်မည်သို့သက်ရောက်မှုသူတို့ကို, ပိုသူတို့တစ်တွေကြိုးထုံးစံ၌သငျတို့ထံမှမဝယ်သို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အနိုင်အထက်နေကြတယ်.
ဗီဒီယိုအကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာကြောင့်သင့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုရောက်ရှိဖို့အားလုံးကိုစျေးကွက်လမ်းကြောင်းများနှင့်အတူပေါင်းစည်းနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူ, သင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်တွေရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေ, အပြန်အလှန်က်ဘ်ဆိုက်များ, ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အပေါ်တောင်မှအီးမေးလ်များနှင့်. အမှန်တရားသင်မသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုလုပ်နေတာသို့မဟုတ်တို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းဘာ၏ရှင်းပြဗီဒီယိုများနှင့်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင်ပိုမိုအောင်မြင်ရန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
YouTube ဗီဒီယိုဒီတော့ပေါ်ပြူလာနှင့်အောင်မြင်သောဖြစ်ကြောင်းသင်ထင်ပါသလဲအဘယ်ကြောင့်? အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်း: လူတွေကသူတို့အပြန်အလှန်ကြောင့်ဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ဖို့ကိုချစ်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ. ဤအချက်ကိုသင်၏ video စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုလည်းထင်ရှားစေကြကုန်အံ့. သို့သော်ရှိသမျှသောမဟုတျပါဘူး. သူတို့ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလူတွေကသင့်ရဲ့ website မှာပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းသောကွောငျ့ Videos ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်မြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်. Videos အလူတွေကိုသင့်ရဲ့ website မှာအတူနေဖို့နဲ့ကြာကြာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကူညီ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများပိုမိုမြင့်မားသင့်ရဲ့ site ကိုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အောင်. စဉ်းစား: ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အလွန်သဘာဝအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြားသူများအပေါ်ထက်ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာနှင့်ဆောင်းပါးများကို / ခေါင်းစဉ်အပေါ်ပိုပြီး click လုပ်လေ့.
အလုံးစုံ, သင် ... ရမည် ဗီဒီယိုတစ်ကားသင်သည်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထွက်ရပ်ကိုကူညီနိုင်ပုံကိုလေ့လာသင်ယူ ဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှာအောင်မြင်မှုရရန်. ဤအတူ, သငျသညျအမှတ်တံဆိပ်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်တာနိုင်ပါလိမ့်မည်, ဆောင်ပြောင်း, ပင်ရိုးရှင်းသောဗီဒီယိုများနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ရည်ညွှန်းရယူ.
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "တစ်ဗီဒီယိုသင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များခုနှစ်တွင်ထဲကရပ်ကိုကူညီပါနိုင်ပုံကိုလေ့လာပါ"